အစ္စလာမ့်အခွန်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
အစ္စလာမ့်အခွန် ဟူသည် အစ္စလာမ့်ဥပဒေအရ ပေးဆောင်ရသော အခွန်အခများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ "မြေခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအခြေအနေ"နှင့် "အခွန်ထမ်း၏ လူမှုရေး(သို့)ဘာသာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေ" နှစ်မျိုးလုံးတွင်အခြေခံသည်။
ဇကားသ် - အစ္စလာမ့်မဏ္ဏိုင်ငါးရပ် မှ တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ မွစ္စလင်မ်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက်လှူတန်းရန် ယေဘုယျ အားဖြင့်အခွန်အဖြစ် ၂.၅%ပေးရန် မွစ္စလင်မ်များအတွက်သာ စည်းကြပ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ဤသည်အစ္စလာမ်နိုင်ငံ တော်ကကောက်ယူသောအခွန်ဖြစ်သည်။
ဂျိဇ်ယဟ် - တစ်ဦးချင်းဆိုင်ရာ နှစ်စဉ် အခွန် သည် သမိုင်းအရအစ္စလာမ်နိုင်ငံများတွင် မွစ္စလင်မ်မဟုတ်သူအချို့ -ဇင်မ္မီး-(အစ္စလာမ်နိုင်ငံဥပဒေတွင်းထာဝရနေထိုင်သူများ) အတွက် သတ်မှတ်ထားပြီး ဆင်းရဲသားများ အမျိုးသမီးများ ကလေးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ကင်းလွတ် ခွင့်ပေးထား သည်။ (ေအာက်တွင်ရှု)
ခရားဂျ် - အစတွင် မွစ္စလင်မ်မဟုတ်သူများအတွက်သတ်မှတ်ထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မွစ္စလင်မ်များအတွက်လည်း သတ်မှတ်ခဲ့သည့် မြေခွန်ဖြစ်သည်။
အုရှ်ရ် - လယ်ယာမြေရိတ်သိမ်းခွန် ၁၀%၊ မိုးရေဖြင့်စိုက်သော လယ်ယာမြေတွင် ၁၀%နှင့် ရေသွင်းစိုက်သော လယ်ယာမြေတွင် ၅% ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်များဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ မွစ္စလင်မ်များ မိမိတို့ထုတ်ကုန်များတွင် အခွန်ပေးစေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားတင်သွင်းကုန်များအပေါ် အခွန် ၁၀% ပေးဆောင်ရန် စည်းကမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ခလီဖဟ် Umar ibn al-Khattāb သည် အုရှ်ရ်စည်းကမ်းကို သတ်မှတ်သော ပထမဆုံး မွစ္စလင်မ်အာဏာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ [ကိုးကားချက်လိုသည်]
စီးပွားရေးပါမောက္ခMurat Çizakça၊၏ သုတေသနအရ ဇကားသ်၊ ဂျိဇ်ယဟ်နှင့် ခရားဂျ်တို့သာBuktasiraတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အုရှ်ရ်သည် အစ္စလာမ်အစောပိုင်းကာလများတွင် ရေလောင်းစိုက်ပျိုးသော လယ်ယာမြေထွက်ကုန်အတွက် ၅% (သို့)ဆည်ရေအသုံးပြုလယ်ယာမြေ ထွက်ကုန်အတွက် ၁၀%အခွန်သတ် မှတ်ထားသည်။ ခလီဖဟ် Umar ibn al-Khattāb သည် နယ် စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ခွန် ပါဝင်သည့် အုရှ်ရ်ကို ကျယ်ပြန့်စေရန်ပြုလုပ်သူဖြစ်သည်။ အုရှ်ရ်၏ အဓိပ္ပါယ်အစစ်အတိုင်း ဆယ်ပုံတစ်ပုံ အဖြစ် အစ္စလာမ်အုပ်ချုပ်ခံ နယ်မြေများဖြစ်သော စပိန်နှင့် မြောက်အာဖရိကအား အိန္ဒိယနှင့် အရှေ့တောင်အာရှမှတစ်ဆင့် ၁၈ရာစုတွင် အုပ်ချုပ်ကျင့်ကြံစေခဲ့သည်။ မွတ်စ္စလင်မ်မဟုတ်သူ ကုန်သည်များ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သွင်းကုန် (သို့) ထုတ်ကုန်များအတွက်သာ ၁၀%အခွန်အဖြစ် အစ္စလာမ်အစိုးရက ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းစည်းကမ်းကို အစ္စလာမ့်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်များတွင်ကုန်ရောင်းလိုသောမွတ်စ္စလင်မ် မဟုတ်သူ နိုင်ငံခြားသားကုန်သည်များနှင့် အစ္စလာမ့်အာဏာ စက်အောက်နေထိုင်သော မွတ်စ္စလင်မ်မဟုတ်သူ (ဇင်မ္မီး)များအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ အလယ်ခေတ် အိုမာန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြား သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးစာ ရွက်စာတမ်းများတွင် ကုန်သွယ်ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာသော သင်္ဘောများပေးဆောင်ရသည့် အုရှ်ရ်အကြောင်းအရာကို လေ့ လာနိုင်ပါသည်။ မွတ်စ္စလင်မဟုတ်သူကုန်သည်များမှတဆင့်ပြောင်းလဲ၍ မွတ်စ္စလင်များကို အခွန်ဆောင်စေခြင်းသည် အုရှ်ရ်အခွန်၏ အားနည်းချက်များကို ဖုံးကွယ်လိုသော အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။
↑ (2013) The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought. Princeton University Press, 545။
↑ (8 Sep 2010) Understanding the Qur'ān: Themes and Style. I. B. Tauris & Co Ltd, 70, 79. ISBN 978-1845117894။
↑ Abou Al-Fadl 2002.
↑ (2001) Islamic Leviathan : Islam and the Making of State Power: Islam and the .... Oxford University Press, 144။ 11 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia. BRILL, 78။ 11 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အစ္စလာမ့်အခွန်များ&oldid=473362" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၇:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။